राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस: नेपालमा भूकम्प आउनुका कारणहरु – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस: नेपालमा भूकम्प आउनुका कारणहरु
२०७० माघ २, बिहीबार ०३:३० गते
प्रत्येक वर्षको माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइने गरिन्छ । वि.सं. १९९० को विनाशकारी महाभूकम्पको संस्मरण गर्दै तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०५५ साल माघ २ गतेदेखि सोही दिनलाई वार्षिक रुपमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउन सुरू गरेको हो ।
यस वर्षको १६औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको नारा ‘नसोधी नबोली आउँछ भूकम्पीय विपदा, जागौँ जुटौँ बचाउन सृष्टिको सम्पदा’ भन्ने रहेको छ । यही वाक्यांशबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ कि भूकम्प आउने कुराको पत्तो कसैलाई हुँदैन र भूकम्पबाट प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दुवै खाले सम्पदाको विनाश हुन्छ । भूकम्प कहाँ, कहिले र कति परिणामको जान्छ भन्ने ज्ञान कसैसँग पनि हुँदैन, केवल भूकम्पविद्हरुले यसको दीर्घकालीन भविष्यवाणी मात्र गर्न सक्छन् । यही दीर्घकालीन भविष्यवाणी र विभिन्न अध्ययनहरुको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल विश्वका १९८ मुलुकमध्ये भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ । अझ काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने त संसारकै पहिलो जोखिमपूर्ण सहर नै काठमाडौँ सहर हो, जुन दिनहुँ भूकम्प गइरहने जापानको कोबे सहरभन्दा करिब २०० गुणाले बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
पृथ्वीका प्लेट (भौगर्भिक भूखण्ड) धस्ने क्रममा दुई प्लेटका चट्टानहरुबीचको घर्षणबाट दबाब उत्पन्न हुन्छ । दबाब बढ्दै जाँदा कमजोर चट्टानले उक्त दबाब थेग्न नसकेपछि विस्फोट हुन्छ । यही कारणबाट पृथ्वीको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा हुन जाने कम्पन नै भूकम्प हो । नेपालको भूकम्पीय इतिहासको अध्ययन गर्दा प्रत्येक ७५ देखि १०० वर्षमा एक महाभूकम्प र प्रत्येक ५० वर्षमा मध्यम खालको भूकम्प गएको पाइन्छ । त्यसैले, १९९० सालको महाभूकम्पलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालमा २०९० सालसम्ममा जुनसुकै बेला महाभूकम्प जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हालसम्मको सबैभन्दा विनाशकारी बनेको प्रकोपको घटना १९९० साल माघ २ गतेको महाभूकम्पलाई लिइन्छ । ८.४ रेक्टर स्केलको सो भूकम्पमा परी नेपालमा मात्र ८ हजार ५ सय १९ जनाको ज्यान गएको थियो भने घर, विद्यालय, देवालय र पाटीपौवा तथा सार्वजनिक भवनसमेत गरी २ लाख ४ हजार ७ सय ४० भौतिक संरचना भत्किएको अभिलेख छ ।
नेपालमा बारम्बार भूकम्प गइरहने हुनाले हामी सबैले सहज अनुमान लगाउन सक्छौँ, नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको देश हो । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा पर्नुको मुख्य कारणमध्ये पहिलो कारण मानव निर्मित भौतिक संरचना र दोस्रो नेपालको भौगर्भिक अवस्थालाई मान्न सकिन्छ । हिन्दकुश हिमालय शृंखलाको कुल ४ हजार ४ सय ३६ किलोमिटरमध्येको ३ हजार ५ सय किलोमिटर अत्यन्त संवेदनशील भूकम्पीय क्षेत्र मानिन्छ । त्यसमध्ये पनि नेपालमा पर्ने ८ सय किलोमिटर शृंखलाकै मध्यभागमा पर्ने भएको हुनाले पनि नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको मानिन्छ ।
हाम्रो देश नेपाल भारतीय प्लेट र तिब्बतीयन प्लेटको जोर्नीमा अवस्थित छ । पूर्वको अफगानिस्तानदेखि पश्चिमको बर्मासम्म फैलिएको हिन्दकुश हिमालय शृंखलाको गर्भमा भारतीय भूखण्ड एउटा प्लेटमाथि बसेको छ भने तिब्बतीयन भूखण्ड अर्को प्लेटमाथि उभिएको छ । यी दुई प्लेटहरु एकापसमा थसिइरहेका छन् । दक्षिणतिरको भारतीय प्लेट वार्षिक एक इन्चका दरले उत्तरतिरको प्लेटभित्र धसिँदै गैरहेको छ । धसाइको यही प्रक्रियाका कारण नै हिन्दकुश हिमालय शृंखला भूकम्पीय जोखिममा रहेको भूकम्पविद्हरुको भनाइ छ । भूकम्पविद्हरुका अनुसार भारतीय प्लेट तिब्बतीयन प्लेटमा घुस्ने यही प्रक्रियाका क्रममा महाभूकम्प जान सक्ने दबाब सञ्चित भइसकेको छ तर कहिले र कहाँ भूकम्प जान्छ, यकिन गर्न भने सकिँदैन । नेपालको राजधानीलगायत अन्य सहरहरुको जमिनको सतह चट्टानरहित भू–बनावटबाट बनेको कारण पनि भूकम्पीय जोखिम बढेको हो ।
यी त भए, भौगर्भिक अवस्थाका कारणले हाम्रो देश भूकम्पीय जोखिममा पर्नुका कारणहरु, यसबाहेकका मानव निर्मित कारणहरु पनि धेरै छन् । अव्यवस्थित सहरीकरणको कारणले पनि भूकम्पीय जोखिमको मात्रा बढाउँदै गैरहेको छ । निर्माण आचारसंहिताविपरीत निर्माण गरिएका अधिकांश भवन, हाउजिङका अग्लाअग्ला भवन, साँघुरा र अव्यवस्थित सडक, सहरी क्षेत्रमा खुला जमिनको अभाव आदि कारणले गर्दा नेपालका अधिकांश सहरहरुमा भूकम्पीय जोखिम बढ्दै गैरहेको छ । भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले दुई वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालको भूखण्डमुनि दबाबका कारण ९२ वटा चिरा (फल्ट) हरु रहेका छन् । ती चिराहरु नै भूकम्पका सम्भावित केन्द्रबिन्दु हुन् । चट्टानले दबाब थेग्न नसकी चिरा परेका हुन्, अब अझै दबाब बढ्दै जाँदा ती चिराहरु कुनै समयमा विस्फोट हुन्छन्, त्यो विस्फोट नै भूकम्प हो । तर, अब ती चिराहरुले दबाब थेग्न नसकी विस्फोट हुने अवस्था कहिले आउँछ, त्यो भने भन्न नसकिने कुरा हो ।
भूकम्प जाने कारण संसारका हरेक ठाउँमा उस्तै हुन्छ, तर भूकम्पपछिको क्षति भने कहीँ बढी र कहीँ कमी हुन्छ । भूकम्पपछिको क्षति बढी र कमी हुनुको मुख्य कारण भनेको नै मानव निर्मित संरचना हो । निर्माणमा प्रयोग गरिएको सामग्री, त्यसमा प्रयोग गरिएको जनशक्ति, तिनको कार्यक्षमता र दक्षता, सम्बन्धित निकायको चासो र सरोकार आदि कारणले भूकम्पीय क्षति कम वा बढी हुने गर्दछ । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा केही कुराहरुमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा हामीले भूकम्पीय क्षति कम गर्न सकिन्छ । घर बनाउनुभन्दा अगाडि इन्जिनियरसँग सल्लाह गरेर मात्र घर बनाउनुपर्दछ, जसले गर्दा घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ । नेपालका अधिकांश सरकारी र संस्थानका भवनहरु पुराना र जीर्ण अवस्थाका छन् । त्यस्ता सार्वजनिक भवनहरुको आवधिक मूल्यांकन गर्ने र ती भवनहरुको बाहिरपट्टि सबैले देख्ने ठाउँमा निर्माण गरिएको मिति, थेग्न सक्ने भार, हालको भौतिक अवस्था र विपदको समयमा अपनाउनु पर्ने सतर्कताका बारेमा सबैले बुभ्mने भाषामा लेखेर टाँस्ने गरिएमा भूकम्पीय जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । जीर्ण र आयु पुगेका घर, सार्वजनिक भवन, बाँध, सडक, पुल आदि संरचनाहरु हटाएर नयाँ बनाउनुपर्दछ । निर्माण कार्यमा अनुमति र स्वीकृति दिने निकायका व्यक्तिको भ्रष्ट मानसिकताका कारण पनि धेरै भवनहरु भूकम्पीय जोखिममा परिरहेका छन् । त्यसैले, मापदण्डविपरीत अनुमति प्रदान गर्ने वा नक्सा पास गर्ने व्यक्तिलाई कार्बाही गर्नुपर्दछ । यदि यसो हुन सकेमा केही हदसम्म भए पनि भूकम्पीय क्षति न्यून गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशमा भूकम्प सम्बन्धी जनचेतनाको कमी छ । हामीले आप्mनै ज्यान जोखिममा पारेर बसिरहेको समेत थाहा पाइरहेका छैनौँ । उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन् वा सर्वसाधारण, कार्यालयमा होस् वा घरमा, हामी प्रायः भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त छैनौँ तर पनि हामी कति जोखिममा छौँ भन्ने हामी कसैलाई पत्तोसमेत छैन । विगत लामो समयदेखि नेपालका प्रत्येक जनता भूकम्पीय जोखिमबाट गुज्रिरहेका छन् । भूकम्प आउँदा टेबल वा खाटमुनि लुक्नुपर्छ भनेर सिकाएकै भरमा भूकम्पीय जोखिम टर्ने होइन, कुरा त त्यो खाट वा टेबल रहेको स्थान भूकम्पीय जोखिमबाट कति सुरक्षित छ भन्ने हो ।
भूकम्प एक अकाट्य प्राकृतिक प्रकोप हो, जसको पूर्वअनुमान वा यकिन केही छैन । भूकम्प कुन बेला कहाँ आउँछ, कसैलाई पत्तो हुँदैन । भूकम्पको परिणामलाई कम वा बढी गर्न सकिँदैन, यद्यपि यसबाट हुने क्षतिलाई भने अवश्य पनि कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि संरचना बनाउँदा ध्यान दिनुका साथै जनतामा भूकम्पीय चेतना फैलाउन आवश्यक छ ।